The Greatest Kuda All — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Munhu wose anoda kudiwa. Tingava vanobvuma kana kwete, tose tine ichi chido kunzwa paakasvika uye vanoongwa nevamwe. Vakawanda vedu vanopedza hwedu hwose upenyu kutsvaka mumwe munhu kuti vanotida, achitarisira kuti mumwe- munhu- achagutsa madanha ichi mukati.
Zvakanaka kana uri kuronga kuti kurasikirwa pachako dzorudo nhasi uye muri kutarisira kuti uchaita pakupedzisira vanogutsa chido ichocho, Ndinoda kuti muzive kuti chinangwa chako chakanyanya kuderera. hamungambovi kuwana rudo kupfuura vose pane mwenje chiedza chisvusvuro manheru ano. zvisinei, pane simba rose, zvose zvinogutsa, rudo rwakakwana yauinayo. Pane Mwari anokuda kupfuura zvaungarasikirwa kufungidzira. Rudo rwake hakuchinji pane dzimwe nguva uye haufaniri kuita Woo naye kana kuzvishandira.
Ndinoziva dzimwe nguva zhinji vedu kushamisika kana kwete Mwari anoda chaizvo kwatiri. Iye sokuti saka kure kure. Uye pamwe taizorega kukahadzika kana akaita chimwe chinhu kuti kujekesa kwatiri. Chokwadi kwatiri, He anotova. The Bible rinoti, "Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira.”
Uye zvakare unoti, "Nokuti Mwari wakada nyika, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani nani unotenda maari arege kuparara asi ave neupenyu hwusingaperi.”
Mwari akatoratidza kare rudo rwake kwatiri nenzira isina risingadaviriki nzira, nokupa Mwanakomana wake kwatiri. Usaramba chiito chikuru kwazvo chorudo munhoroondo yenyika. Usaramba anoda mweya yenyu. Asi kugamuchira kuti rudo nokuvimba muna Jesu.
Nokuti isu vakatenda paari, hapana chinhu panyika kuti nokusingaperi chingaparadzanisa isu rwaMwari. Uye rudo rwake kuvanhu vake iguru, kuti hatikwanisi kuita chinhu kumuita vanotida kupfuura nechekare anoita.
Saka musi Valentine uyu Day, tora mwoyo fam. Haufaniri kutarisa zvimwe. Mwari anokuda iwe zvakadzama
Dj Mas or Samson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:37 ndiri • pindura
Violetchirwa • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:38 ndiri • pindura
Carolyn • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:38 ndiri • pindura
Kathy Washington7 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:38 ndiri • pindura
kayla:) • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:38 ndiri • pindura